Izindaba - I-RMB ibonge ngaphezu kwe-8% uma iqhathaniswa nedola laseMelika engxenyeni yonyaka, futhi amabhizinisi ezentengiselwano angaphandle athathe izinyathelo eziningi zokugwema izingozi zokushintshaniswa kwamanye amazwe
Kusukela ezingeni eliphansi ekupheleni kukaMeyi kuze kube manje, inani lokushintshaniswa kwe-RMB selitholile yonke indlela futhi lisanda kufinyelela cishe ku-6.5, langena "ezikhathini eziyi-6.5" .Izinga eliphakathi lokulingana le-yuan lehlise amaphuzu ayisisekelo angama-27 aya ku-6.5782 elwa ne-US dollar ngoNovemba 30, idatha evela kuChina Foreign Exchange Trade System ikhombisile. Ngokuya nge-27 Meyi ephansi ye-7.1775, i-yuan ibonge i-8.3% kuze kube manje.
Ngokusebenza okunamandla kwe-RMB, abacwaningi beBhange LaseChina Research Institute bakholelwa ukuthi izizathu eziyinhloko zimbili: okokuqala, ukusayinwa kwe-RCEP kwaletha izindaba ezinhle, ukuhlanganiswa kwesifunda sase-Asia-Pacific kuyathuthukiswa futhi, okusiza ukukhuthaza ukukhula kokuhwebelana kwamanye amazwe kweChina nokuvuselelwa komnotho; Ngakolunye uhlangothi, ubuthakathaka obuqhubekayo bedola laseMelika, babuye bawela cishe kuma-92.2. Ngesonto eledlule, ukwehla kufinyelele ku-0.8%, okuqhubezele ukwazisa okungenziwanga kwezinga lokushintshaniswa kwe-RMB.
Kodwa-ke, kumabhizinisi ezentengiselwano angaphandle, ukwazisa kwe-RMB kungumuntu ojabulayo othile okhathazekile. Lapho imali yasekhaya ibonga, inzuzo yamanani entengo yokuthumela izinto kwamanye amazwe izoncishiswa, futhi izimpahla ezingeniswayo zishibhile. Ngakho-ke, kunenzuzo ukungenisa amabhizinisi, kepha umthelela wokuqhutshwa kokungeniswa kwamabhizinisi nokuthekelisa kabusha ulinganiselwe, kanti umthelela kumabhizinisi wokuthekelisa mkhulu. Kumabhizinisi ezohwebo zakwamanye amazwe, ngaphezu kwezisebenzi zezezimali kudingeka zenze isinqumo esibheke phambili esimweni sezinga lokushintshisana, kubaluleke kakhulu futhi ukukhetha amathuluzi okubiyela izingozi zamazinga okushintshana njengezinketho nokudlulela phambili.